Abacocayo abomileyo kwimarike ngoku kusetyenziswa ekuhlambiseni imishini
Abacocayo abomileyo kwimarike ngoku kusetyenziswa ekuhlambiseni imishini, kodwa uyazi ukuba utyalo-mali luvulekile ivenkile, zeziphi izinto zokucoca ezicocekileyo? Sifanele sibe yindlela yokukhetha nokuthenga iimveliso zokusebenza zokuhlamba? Kholelwa ukuba abaninzi abantu baya kuba nolwazi malunga nale nkalo yengxaki, makhe sihlangane kunye neengcali zoshishino ukuze sifunde ngale ngongoma.
Abacocisi abomileyo bagcina inkqubo yokusebenza eyisiseko kubandakanya ukungakhutshwa komzimba, ukucoca okuomileyo, ukumisa, ukutshiza, oku kuhlamba kwethu kufuna ukuba amanyathelo ayisiseko. Kodwa ezi nkqubo, zonke zifuna inkxaso yoxhobo yokuhlamba okanye uncedo.
Ziziphi izinto zokuhlamba
Ngoko xa uvula ivenkile, oomatshini bokuhlamba abacocekileyo? Ukusuka kwi-sterejizer, isherhi eyomileyo kunye neomisi kwitafile ye-ironing ayinako. Ukongeza, ukwenzela ukuba uhlambe kakuhle, kuyacetyiswa ukuba umsebenzisi angathengisa iingubo zokuhambisa umbane, injini ye-steam kunye nomshini wokupakisha, njl., Oku kuya kusizisa inzuzo engcono yokucoca.
Nangona kunjalo, wonke umntu kwindawo yokuhlamba impahla yokukhetha kunye nokuthenga, uzimisele kakhulu kwimikhiqizo yomkhiqizo. Ngaba ukuhlamba izinto ezilungileyo? Kulo mbandela ukucebisa i-brand ye-ENEJEAN yokucoca. Ngokumalunga ne-brand engaziwayo, abathengisi abakhulu abanokwakhekhnoloji oluvuthiweyo kuphela, kwaye umgangatho uphinde ukhuseleke ngakumbi, ukwenzela ukuba sikwazi ukukhusela iimfuno zentalo-mali ayichaphazelekayo.
Inqaku lokugqibela: Unokukhetha njani umgangatho w...
Inqaku elilandelayo: Indlela yokuchonga amaxabiso o...